» यौन सम्पर्क गर्दा पुरुषलाई बढी पिडा कि महिलालाई ?
यौन सम्पर्क गर्दा पुरुषलाई बढी पिडा कि महिलालाई ?
२८ फाल्गुन २०७६, बुधबार २३:२२
अर्कोतर्फ केटाहरूलाई यौनका विषयमा यस्ता कुरा हुँदैनन् । उनीहरू उत्तेजना र आर्गेजमको कुरा गर्छन् । उता केटीहरूको मनमा यौनको विषयलाई लिएर कैयाै‌ किसिमका भ्रम र डर हुन्छन् । यसकारण यौनसम्बन्ध एक पक्षका लागि शङ्काको विषय हुन्छ । महिलाहरू दुखाइ हुन्छ नै भन्ने मान्छन् तर यस्तो दुखाइ पहिलो पटक सेक्स गर्दा मात्र हुन्छ भन्ने हुँदैन ।
२४ वर्षकी जेस भन्छिन्, सम्भोग गर्दा पीडा र उदासिनताबाट कसरी बँच्न सकिन्छ भन्ने कुरा थाह छैन ? उनले भनिन्, ‘मैले यौनको बारेमा जे सुनेकी थिएँ, त्यसबाट धेरै तनाव भयो । म धेरै सतर्क थिए । म आर्गेजमलाई लिएर कैयौँ धारणाले ग्रस्त थिएँ । मलाई जे भनिएको थियो, त्यसमा यौन सम्बन्धको समयमा पनि मुक्त हुन सकिनँ । मलाई के भनेका थिए भने सम्भोगको समयमा दुख्न सक्छ र मैले नचाहेर पनि स्वीकार गर्नु पर्यो ।’
उनले भनिन्, ‘मैले एक सतर्क र शिष्ट पाटनरलाई छानेँ । यसको साथै मैले शारीरिक सम्बन्धलाई लिएर अफै केही चेकजाँच गरेँ । यदि तपाईंको पाटनर ठीक छ भने दुखाइ भन्ने कुरा झुटो हो ।’ हनाह विन युट्युव च्यानलमा सम्भोगसँग सम्बन्धित सबै कुरामाथि चर्चा गर्छिन् । यौन सम्बन्धमा दुखाइको विषयमा उनको भनाइ छ, ‘कैयौँ महिलाहरू सम्भोगको समयमा दुखाइको सामना गर्नुको कारण सम्भोगमा दुखाइ नै निहित हो, बरु हामीलाई राम्रो यौन सम्बन्ध कसरी हुन्छ भन्ने जानकारी नभएर यस्तो हुनसक्छ ।’
यद्यपि युनिर्भसिटी अफ ग्लास्गोका सिनियर रिसर्च फेलो डा. क्रिस्टिन मिसेल भन्छिन्, सम्भोगमा दुखाइको सम्बन्ध पूर्ण रूपमा मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक कारणले गर्दा हो । क्रिस्टिनले २०१७ मा एउटा अध्ययन गरेकी थिइन् । यसमा बेलायतमा १६ देखि २४ वर्षका युवतीहरूमा १० प्रतिशतलाई सेक्समा दुखाइको सामना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा समावेश थियो ।
किम भन्छिन्, ‘महिलाहरू पीडा महसुस भएको बेला चुपचाप सहन्छन्, उनीहरू बोल्दैनन् । पीडा भए पनि नबोल्नुमा कि उनी आफैमा कुनै न कुनै समस्या छ भनेर कि आफ्नो पाटनरले अन्यथा नसोचुन् भनेर डराएका हुन्छन् । सेक्सको समयमा पारस्परिक, क्रमशः र एकअर्कोलाई बुझ्ने र महसुस गर्न लायक बन्नु पर्छ ।’ स्रोतः ल्बास्ट खबर